ခေါင်းအုံးကိုသုံးပြီးလုပ်ပေးရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနဲ့ရရှိလာမယ့်ကောင်းကျိုးများ – MyMedia Myanmar
လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးထဲမှာမှ ခေါင်းအုံးကိုသုံးပြီးလုပ်ပေးရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာမယ့်ကောင်းကျိုးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Bridge with squeeze
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ယောဂဖျာပေါ်မှာ နေပေးပါ။ လက်နှစ်ဖက်၊ လက်ဖဝါးကို ဆန့်ထုတ်ထားပြီး ဖျာနဲ့ကပ်ထားရပါမယ်။ ဒူးနှစ်လုံးကြားမှာ ခေါင်းအုံးညှပ်ပြီး ခါးနဲ့တင်ပါးကို အပေါ်ကော့လိုက်၊ အောက်ပြန်ချလိုက် လုပ်ပေးရပါမယ်။ အကြိမ် ၂၀ လုပ်ပေးရပါမယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ပေါင်တံသွယ်လျစေပြီး၊ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားနဲ့ တင်ပါးကြွက်သားတွေ သန်မာစေပါတယ်။
ယောဂဖျာပေါ်မှာလှဲပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ကပ်ထားပြီး ဆန့်ထုတ်ထားပါ။ ပုံထဲမှာပြထားသလို ခြေထောက်တစ်ဖက်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးကိုထားပေးပါ။ နောက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကတော့ ဒူးနည်းနည်းကွေးလိုက်၊ ပြန်ဆန့်ထုတ်လိုက်နဲ့ ဖြေးဖြေးချင်းစီ အကြိမ် ၂၀ လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဘယ်ခြေထောက်ပြီးရင် ညာခြေထောက် ပြောင်းလုပ်ပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ခြေသလုံးတင်းပြီးညောင်းတာတွေ၊ ခြေဖဝါးညောင်းကိုက်တာတွေ၊ လှေကားတွေတက်ရလို့၊ လမ်းအများကြီးလျှောက်ရလို့ ခြေထောက်ညောင်းတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
3. Superwoman strength exercise
ယောဂဖျာပေါ်မှာ မှောက်ပြီး လက်ကိုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ထားပါ။ ခြေသလုံးနှစ်ခုကြားမှာ ခေါင်းအုံးကိုညှပ်ပြီး ခြေထောက်ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြှောက်လိုက်၊ ပြန်ချလိုက်နဲ့ ၅ ကြိမ်လုပ်ပေးရပါမယ်။ မြှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ ၅ စက္ကန့်လောက် မြှောက်ထားရပါမယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျောရိုးနာတာကို သက်သာစေပြီး တင်ပါးကြွက်သားနဲ့ ခြေသလုံးကြွက်သားတွေ သန်မာစေပါတယ်။
ပထမပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခေါင်းအုံးပေါ်ကို လက်နှစ်ဖက်တင်ပြီး လက်သီးဆုပ်ထားပါ။ ပြီးရင် လက်သီးဆုပ်ကိုပြန်ဖြေလိုက်ပါ။ အဲ့အတိုင်း ဖြေးဖြေးချင်းစီ လက်သီးဆုပ်လိုက်၊ ပြန်ဖြေလိုက်နဲ့ အကြိမ် ၃၀ လောက် လုပ်ပေးပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပေးခြင်းကတော့ လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ လက်ရုံးကြွက်သားတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ခေါင်းအုံးအမြင့်ကို ယောဂဖျာပေါ်မှာချပြီး ပထမပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခေါင်းကို မှောက်ထားပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကိုကွေးပြီး ခေါင်းအုံးဘေးချထားပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို တင်ပါးအောက်ထည့်ပြီး နောက်တစ်ဖက်ကိုတော့ ဆန့်ထုတ်ထားပါ။
ပြီးရင်တော့ ဒုတိယပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လက်ကို ခေါင်းအုံးပေါ်တင်လိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကို ပုံထဲကလိုလုပ်ပေးပါ။ အဲ့အနေအထားအတိုင်း မျက်စိမှိတ်ပြီး ၃ မိနစ်လောက် နေပေးရပါမယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် တင်ပါးကြွက်သားတွေ သန်မာလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား မှန်လာစေမယ်။ Stress တွေလည်း လျော့ကျသွားစေပါမယ်။
MyMedia Myanmar2021-02-21T18:02:25+06:30February 21st, 2021|MYSTYLE MYANMAR|